Ciidamada Ogaadeeniya Oo Xasuuq kii Uxummaa Kasameeyey Deegaanka Gaashaamo, Kuna Kaayey Shacab Ka Badan 50 qof… | Berberatoday.com
Ciidamada Ogaadeeniya Oo Xasuuq kii Uxummaa Kasameeyey Deegaanka Gaashaamo, Kuna Kaayey Shacab Ka Badan 50 qof…
Gaashamo(Berberatoday.com)-Wararka naga soo gaadhay deegaanka Jaamac Dubad, ayaa shaaca ka qaaday in ay ciidanka New Police ee killidhka shanaad ee dalka Itoobiya ay ku xasuuqeen dad aad u badan kuwaasoo tiradood lagu sheegay 41 qof.
Gaashamo (xogreebnews)-Wararka naga soo gaadhay deegaanka Jaamac Dubad, ayaa shaaca ka qaaday in ay ciidanka New Police ee killidhka shanaad ee dalka Itoobiya ay ku xasuuqeen dad aad u badan kuwaasoo tiradood lagu sheegay 41 qof.
Tuullaada Jaamac Dubad oo maamul ahaan hoos tagta Degmadda Gaashaamo, ayaa la sheegay in ciidankani ay soo galeen ka dib-na dileen 41 qof oo isugu jira caruur iyo haween, waxaanu warkj sheegayaa in 30-ka mid dadka dhintay lagu dilay masaajid oo ay ku urureen markii ay arkeen in badheedh ah loo laynayo iyagoo is-yidhi bal inaad ku bad-baadaan guriga Alle. Sidoo kale, ma jiro guud ahaan wax dhaawac ahi oo la wadda dilay dadkii deegaanka deganaa oo la wadda xasuuqay. intaas markii ay dhacday ciidankan cadaawadda geystay waxay gudbeen guud ahaan guryihii iyo wixii hanti dhex-taalay.
Si kastaba ahaatee, ilaa hadda lama garanayo sababta ay ciidankani ay u laayeen dadka maatadda ah ee isugu jira haweenka iyo caruurta. Deegaankan ay masha-qadu ka dhacday, ayaa qiyaas ahaantii u jirta xadka gobolka Togdheer 220-KM.
Dhacdadan oo ahayd mid aad looga ar-gagaxay, isla markaana ku cusub guud ahaan deegaanaddan, ayaa dhawrayaa wixii jawaab ah ee ay ka bixin lahayeen Xukuumadda Somaliland iyo dadka ku dhaqan deegaanadda ay xukunto Gaashaamo oo dhalasho ahaan u dhashay labadda dal ee Itoobiya iyo Somaliland-ba.
Rabi naxariistii, ha ka waraabiyo dadkaas gacan ka xaq daran ayaa disha